Solosaina fanarenana partition - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>mg>Solosaina fanarenana partition
Solosaina fanarenana partition
3. Fanarenana fitrandrahana
Amin'ny dingan'ny fampiasana Bplandatarecangana dia ho hitanao fa ny Bplandatarecovery dia manana ny asan'ny fanarenana fisarahana, araka ny asehony etsy ambany:
Very ny fikarohana. Fizarana
Hampiditra ny fanarenana fizarazarana fizarana
Dia hiakatra ny varavarankely fidirana amin'ny fikatsahana ny fisarahana very, araka ny asehony etsy ambany:
Bplandatarecangana Safidy fisarahana fizarana
Amin'ny tranga sasany, tena mety hampiasa ny asa fanarenana partition, haingana be ny hafainganam-pandeha ary azo averina indray ny kapila tany am-boalohany (tsy misy kopia fanampiny data naverina), sns.
Na izany aza, ny fanarenana fisarahana dia manana fepetra takiana avo kokoa ho an'ny mpampiasa, ary mitaky fahatakarana manokana ny fizarazarana ny kapila mafy indrindra.Raha ny fisarahana amina rafitra dia tokony hojerena ny fanombohana ny rafitra sy ireo olana hafa. Ny fifanakalozan-kevitra, ireo mpampiasa liana dia afaka mijery ireo antontan-taratasy fanampiana an-tserasera ao amin'ny tranonkala ofisialin'ny Bplandatarecangana.
4. Fanitsiana ny angon-drakitra fanarenana data
Ho an'ireo injeniera fanarenana ny matihanina, na dia efa miasa sahady aza ny fampandehanana ny data momba ny lozisialy Bplandatarecangana Na izany aza, amin'ny toe-javatra sasany, dia mety kokoa indraindray ny manova mivantana ireo marika diso sy angon-drakitra manan-danja ao amin'ny kapila mafy. Matetika, rehefa manao fandehanana mitovy, ny rindrambaiko WinHex dia amboarina amin'ny ankapobeny .. Raha ny marina, ny Bplandatarecovery dia manome ny fanovana ny sehatry ny sehatra, izay afaka koa manova mivantana ny angon-drakitra ao anaty kapila mafy, miaraka amin'ny fiasan'ny fitantanana fisarahana Bplandatarecovery, sns, dia mora kokoa noho ny WinHe , Mora kokoa.
Safidio ny kapila mafy na fizarazarana, tsindrio ny bokotra havanana amin'ny kianja, amin'ny menu fehin-dàlana fohy, safidio ny "fisokafana ny sehatry ny sehatra 16", toy ny aseho eto ambany:
Bplandatarecangana mpankafy. Fanovana ny fizarana
Ampidiro ny asan'ny fanovana ny sehatra ary amboary mivantana ny angon-drakitra kapila
Toy izany koa, hiseho eo amin'ny ankavanana ny tontolon'ny fanitsiana ny sehatra ho an'ny fizarana na kapila mafy. Sary:
Bplandatarecangana panel panel
Ny interface sy ny asan'ny fanovana sehatra dia mitovy amin'ny WinHex, ary ny fiasa dia mitovy ihany, saingy mitovy ihany koa ny fiasa miaraka amin'i Bplandatarecangana Fampiasa, mora kokoa sy malefaka ampiasaina.
5. Fanarenana ny mpizara RAID
Bplandatarecesy dia manohana ny fanarenana ny server Raid, ny mpampiasa dia afaka mampiasa Bplandatarecesy mba hamerenana indray ny Raid, ary avy eo averina ny angon-drakitra, araka ny aseho etsy ambany:
fanarenana ny mpizara RAID
Lohahevitra lehibe, fitaovana apetraka RAID virtoaly
Bplandatarecangana nametraka RAID virtoaly
Ireo mpampiasa dia afaka manampy disika mafy, mametraka tarehimarika toy ny karazana RAID, ary mamerina ny data rehefa mamorona RAID virtoaly.
Ny fanarenana RAID dia asa mandroso be.Ireo mpampiasa tsy zatra an'ny RAID dia afaka mifandray amin'ny ekipa manam-pahaizana Bplandatarecangana mba hitari-dalana lavitra ny fanarenana RAID.
6. Fameren-dramatoa data virtoaly
Ampiasao matetika ireo milina virtoaly Ahoana no fomba fampiasana Bplandatarecesy hamerenana ny data momba ny milina virtoaly? Azonao atao ny mieritreritra ny fametrahana Bplandatarecovery amin'ny milina virtoaly dia averina amin'ny laoniny ny data ...
Saingy tsy atolotray anao ny hanaovana an'io.Tsy fomba fanolanana fotsiny io fomba io, fa matetika manahirana ny olana hafa. Ny fomba tsotra sy mahomby dia ny fampandehanana ny Bplandatarecovery amin'ny solosaina tena izy, ary avy eo ampidiro ny rakitra maimaim-poana amin'ny lozisialy virtoaly.Afindra aorian'ny fampidinana, azonao atao ny mamerina ny angon-drakitra ao anaty kapila mafy virtoaly toy ny hard disk mahazatra.
Ahoana ny fametrahana ny kapila mafy virtoaly: ny menu lehibe, ny kapila mafy manokatra ny rakitra kapila mafy virtoaly, toy ny aseho eto ambany:
Ampiasao ny Bplandatarecesy hanokatra ny kapila virtoana
Rehefa avy namoaka ny kapila mafy virtoaly dia afaka mamerina data ianao toy ny kapila mafy mahazatra
Misintona Bplandatarecesy izao ary manandrana ity fitaovana famerenana data mahery vaika ity.
PreHard disk ratsy fanaraha-maso sy fanamboarana
NextU disk tampoka nandritra ny fampiasana